DEGDEG: 5 Askari oo Ka Tirsan J/Land oo Lagu Dilay Kamiin Ka Dhacay Gedo. – Shabakadda Amiirnuur
DEGDEG: 5 Askari oo Ka Tirsan J/Land oo Lagu Dilay Kamiin Ka Dhacay Gedo.
December 6, 2018 3:38 am by admin Views: 75
Askar ka tirsan ciidamada maamulka “Jubbaland” ayaa lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Gedo xalay afar saac waxaana inoo suura gashay inaan helno faahfaahinta dhacdadan oo dhammeystiran.
Ciidamadan dhabbaha loo galay ayaa ujeedadoodu ahayd iney dhac ka geystaan tuulo ballaaran oo la yiraahdo “Hareer Tuur” oo dhacda inta u dhaxaysa Baladxaawo iyo Tuulobarwaaqo halkaasoo uu ka jiro maamul islaami ah.
Sida aan xogta ku heleyno waxaa ciidamadan laga soo abaabulay degmada Doolow, waxaana ay soo galeen socod dheer, iyagoo soo maray Beledxaawo. Balse ciidamada Xarakada Al-Shabaab oo u muuqday kuwa la socday dhaqdhaqaaqooda ayaa foodda galiyay goor ay u dhawaayeen tuuladii loo soo diray.
Mar qura ayaa iyagoo si taxadar leh u socda waxay la kulmeen rasaas culus oo darrandoori ah, in yar kadib-na waa ay kala firxadeen iyagoo afka aadiyay dhanka Baladxaawo.
Inta la xaqiijiyay waxay ciidamadan ka carareen meydad 5 (shan ah) iyo 4 (Afar qori) sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha Xarakada Al-Shabaab ee gobolka Gedo. Meydadka ay ka carareen ayaa waxaa ku jira taliyihii ciidanka hor kacayay oo lagu magacaabo Cali Fanax.
Maamulka Baladxaawo ee Jubbaland oo aan dhankooda la xariirnay ayaa ka gaabsaday inuu ka hadlo dhacdadan. Laakin bulshada ku dhaqan tuulooyinka u dhow Baladxaawo ayaa muujiyay dareen farxadeed markii ay saaka ka war heleen sida ay wax u dhaceen.
Mid kamid ah wax garadka tuulooyinka ayaa sheegay inuu u duceynayo ciidamadii Mujaahidiinta ee xalay ka hor tagay askarta Jubbaland ee loo soo abaabulay iney dhac u geystaan dadka maatida ah, gaar ahaanna ay qalqal galiyaan xilli habeen ah.
Dhawaan ayay ahayd markii ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab ay hawl gal gaar ah ka fuliyeen degmada Baladxaawo kuna dileen oday gacan saar dhow la lahaa Xabashida Itoobiya.